स्थायी तरलता सुविधा लिन खाता सञ्चालकहरुको विवरण पठाउन बैंकहरुलाई निर्देशन
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा तथा खुला बजार कारोबारअन्तर्गतका सुविधा लिनका लागि खाता सञ्चालकहरुको जानकारी पठाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई खाता सञ्चालकहरुको जानकारी पठाउन निर्देशन...
राष्ट्र बैंकले रु. १०.२० अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने, भोलि बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि वैशाख ५ गते १० अर्ब २० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले वैशाख ६ गते जारी गर्न लागेको ९१ दिने र १८२ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल भोलि सोमबार गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले ९१ दिनका लागि ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। यो ट्रेजरी बिल आउँदो साउन ३ गते...
पुनर्बहालीको माग गर्दै निलम्बित गभर्नर सर्वोच्च अदालत पुगे
काठमाण्डौ। नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। गत चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो। सरकारले पूवाग्राही ढंगले आफूलाई निलम्बन गरेको भन्दै पुनर्बहालीको माग गर्दै अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। अधिकारीले...
राष्ट्र बैंकद्वारा आरटीजीएस कारोबार समयावधिमा संशोधन (सूचनासहित)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस कारोबार समयावधिमा संशोधन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै आटीजीएस कारोबार समयावधिमा गरिएको संशोधनका विषयमा जानकारी गराएको हो। आरटीजीएस सिस्टम रुल, २०१९ को अनुसूची–६ मा संशोधन गरिएको हो। अब संशोधित समयावधिअनुसार गर्न गराउन आटीजीएस...
गभर्नरमाथि गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता लिन राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको माग
काठमाण्डौ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरिएको कारबाहीविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन्। कर्मचारीहरुले गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाहीको विरोधस्वरुप आज राष्ट्र बैंकमा कोण सभा आयोजना गरेका हुन्। सभामा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रुद्रप्रसाद तिम्सिनाले गभर्नर अधिकारीमाथि गरिएको...
महँगी ह्वात्तै बढ्यो, व्यापार घाटा बढेर रु. ११.६० खर्ब पुग्यो
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय देशमा महँगी ह्वात्तै बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.१४ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको यही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.०३ प्रतिशतमा सीमित थियो। यो हिसाबले मुद्रास्फीति...
रु. १५.२५ अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, भोलि बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि चैत २८ गते १५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले चैत २९ गते जारी गर्न लागेको ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल भोलि सोमबार गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले ९१ दिनका लागि ८ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। यो ट्रेजरी बिल २०७९ असार २८ गते...
आरटीजीएस प्रणाली आज सुचारु रहने
काठमाण्डौ । राम नवमीका अवसरमा आज आइतबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। आज सार्वजनिक बिदामा पनि आरटीजीएस प्रणाली सुचारु रहने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको हो। राष्ट्र बैंकले शनिबार एक सूचना जारी गर्दै आरटीजीएस प्रणालीमा नर्मल बिजनेस डे सञ्चालन हुने जाइएको छ। ...
कसरी नेपालको अर्थतन्त्र ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ? यस्ता छन् पूर्वगभर्नर नेपालका सुझाव
– अनन्त्य सुन्दर काठमाण्डौ । नेपालको हालको अर्थतन्त्रको अवस्थाले सबै नागरिक चिन्तित भएका छन्। बढ्दो ब्याजदर, तरलता चाप, बैंकमा लगानीयोग्य रकमको हाहाकार, आयातमा कडाइलगायतले लगानीकर्ता, उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर सबै मर्कामा परेका छन्। नेपाल कतै श्रीलंकाको बाटोमा त छैन ? भन्ने प्रश्नले आमनागरिकलाई अहिले सताएको छ। अर्थतन्त्रको अवस्था...
गभर्नर भन्छन्–‘नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोतर्फ उन्मुख’, अर्थमन्त्री भन्छन्–‘त्यस्तो होइन’
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको सम्बन्धमा देखिएको तिक्तता झनै बढ्दै गएको देखिएको छ। आज राजधानीमा आयोजित अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजनामा अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीको परस्पर विपरीत अभिव्यक्तिले यी...
रु. ३२.१० अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, आज बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चैत २१ गते ३२ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले चैत २२ गते जारी गर्न लागेको २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल आज सोमबार गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले २८ दिनका लागि २ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। यो ट्रेजरी बिल २०७९ वैशाख २० गते...
आरटीजीएस प्रणाली शुक्रबार र शनिबार सुचारु रहने
काठमाण्डौ । घोडेजात्राका अवसरमा भोलि शुक्रबार काठमाण्डौ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। भोलि सार्वजनिक बिदामा पनि आरटीजीएस प्रणाली सुचारु रहने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना जारी गर्दै आरटीजीएस प्रणालीमा नर्मल बिजनेस डे सञ्चालन जनाएको छ। यसैगरी सूचनामा पर्सि शनिबार पनि आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालन...
आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालनको समयसीमा बढाइयो
काठमाण्डौ । रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली सञ्चालनको समयसीमा बढाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना जारी गर्दै आउँदो वैशाख २ गतेदेखि लागू हुने गरी आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालनको समयसीमा बढाइएको जानकारी गराएको छ। राष्ट्र बैंकमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको आरटीजीएस प्रणालीमार्फत सर्वसाधारणले कारोबार गर्न सक्ने...
अब चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा सामान आयात गर्ने गरी एलसी जारी गर्न सकिने
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय नाका रहने गरी सामान आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०७८ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। योसँगै अब चोभार सुक्खा बन्दरगाहबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सकिने भएको छ। यसका साथै...
वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप बढ्यो, कर्जा घट्यो, अन्तरबैंक ब्याजदर भने ७% पुग्यो
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप बढेको छ भने कर्जा लगानी घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चैत १३ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत चैत १२ गतेसम्म कुल निक्षेप ४३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। यो हिसाबले वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप एकैदिन ३ अर्ब रुपैयाँ बढेको...